आधारभूत शिक्षाका लागि को अनशन बसिदेला ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
आधारभूत शिक्षाका लागि को अनशन बसिदेला !
२०७२ बैशाख ३, बिहीबार ०३:०८ गते
मेडिकल शिक्षामा भएको विकृति अन्त्य होस् भन्ने माग राखेर डा. गोविन्द केसीले अनशन बस्न थालेको पाँचपटक भयो । उनको पाँचौँ अनशन भर्खर सकिएको छ । मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि उनले राखेका लगभग सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार भएपछिमात्रै उनले आमरण अनशन तोडे । अब सरकारले वाचा पूरा नगर्ने हो कि ? डा. केसी फेरि छैटौँपटक अनशन बस्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि चौतर्फी रुपमा छ । गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दा र आन्दोलनका स्वरुपका बारेमा पनि विमति राख्ने सानो समूह देखा नपरेको होइन । अरुमा छ हाम्रोमा त्यस्तो छैन भन्ने आशय तथा मनसाय राखेर पनि गोविन्द केसीको माग र आन्दोलनप्रति विरोध गरे केहीले । समग्रमा प्रणाली नै गलत छ भनेर केसीले आवाज उठाए । उनको माग सम्बोधन भयो सरकारबाट ।
मानव स्वास्थ्य गम्भीर विषय हो । मानव स्वास्थ्यका लागि खट्नेहरुले पाउने शिक्षामा विकृति घुस्न हुँदैन भनेर केसीले माग उठाए, समर्थन पाए । मेडिकल शिक्षा माफियाको हातमा जान लाग्यो । नाफा–नोक्सानमात्रै हेरेर चल्ने गलत भावना भएकाहरुले यसलाई डुबाउन थाले भन्ने केसीको मत थियो । मेडिकल शिक्षामा लाखौँ, करोडौँको कुरा हुन्छ । त्यही तहका व्यक्तिहरु यसमा लागेका छन् । अनि, मेडिकल शिक्षा लिने पनि सीमित नै छन् । तैपनि, यसले अप्रत्यक्ष रुपमा समग्र समुदायलाई नै प्रभावित पार्ने हुनाले डा. केसीको समर्थनमा देश नै उर्लेको थियो ।
डा. केसीले मेडिकल शिक्षाका बारेमा कुरा उठाए । त्यस्तै विसंगतिहरु विद्यालय तहको शिक्षामा पनि अत्यधिक छ । विद्यालय तहको शिक्षा जसलाई हामी आधारभूत शिक्षा पनि भन्छौँ, यस्तो शिक्षामा विकृति गाँजिए पनि सुधारका लागि दह्रो आवाज उठाउने गोविन्द केसीजस्ता कोही भेटिएका छैनन् । समस्याको ताप र चापले सबै थला परेका छन्, तर आवाज उठाउन निस्कने फेला पर्न सकेका छैनन् । उठे पनि सानो स्वर उठेको छ, जसले यहाँभित्रको विकृतिलाई छुन सकेको देखिँदैन । सिस्टम नै भ्रष्ट भएपछि त्यसलाई हटाउन सानो होइन, ठूलै धक्का चाहिन्छ ।
उमेर पुगेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भित्राएर उनीहरुमा भएको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने अभिभारा विद्यालय तहको शिक्षाको हो । तर, हाम्रा विद्यालयहरुले यसरी काम गर्छन् त ? अहम् प्रश्न यही हो । विद्यालयहरु यो मूलभूत पक्षमा फेल छन् । हाम्रा विद्यालयहरु त केही विद्यार्थीले डिस्टिङ्सन ल्याएर विद्यालय शिक्षा पूरा गराउने ध्याउन्नमा मात्रै छन् । एसएलसीमा डिस्टिङ्सन ल्याउनुपर्छ । अभिभावकको मन र दिमागमा यही भरिएको छ । डिस्टिङ्सन ल्याउन सक्ने हैसियत नभएका छन् भने राम्रो विद्यालयमा सुरूकै कक्षामा नै भर्ना पाउँदैन । अभिभावकको मनमा यही भरिएको छ । अनि, समाजमा फस्टाएको व्यवसाय भएको छ डिस्टिङ्सन ल्याउन सक्ने विद्यार्थी तयार गर्ने व्यवसाय ।
विद्यालय शिक्षाको उत्कृष्टताको आधार एसएलसी उत्तीर्ण हुँदा डिस्टिङ्सन आउनुमात्रै हो त ? अहिलेको हाम्रो परिपाटीले यसैलाई सही भन्छ । तर, समग्रमा त्यो होइन । नम्बर कति ल्यायो भनेर मापन गर्ने होइन कि विद्यालय तहको आधारभूत शिक्षाले उसको अन्तरनिहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न कति सक्यो ? उसलाई सिर्जनशील बनाउन कत्तिको मद्दत पु¥यायो भन्ने बृहद् अवधारणाभित्र रहेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नम्बर सबै कुराको मापन हुन सक्दैन । तर, हामी झ्यास्सै देखिने नम्बरभन्दा पर जान सकेका छैनौँ । नम्बर कसरी ल्याउने ? स्कुल जान सुरू गर्दा नै त्यो वाचा पूरा गराइदिन्छौँ भनेर अहिले धेरै आउने गरेका छन्, हाम्रा दैलामा । उनीहरुसँग यसो दुई–चार कुरा गर्न सामथ्र्य राख्न सक्दैनौँ हामी । किनकि, उनीहरु हाम्रा नानीबाबुलाई एसएलसी पास हुँदा डिस्टिङ्सन ल्याउन सक्ने बनाउने भगवान्हरु हुन् !
सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरुले बाटोमा उभिने हर कोहीलाई मान्छेभन्दा पनि उनीहरुलाई गाडी चढ्दा आउने भाडाका आधारमा नाम राखेका हुन्छन् भन्ने चर्चा हुन्थ्यो । जस्तै ऊ चढ्दा १५ रूपैयाँ भाडा आउँछ भने चालकले सहचालकलाई भन्थे रे– ‘हेर् केटा, बाटोमा १५ रूपैयाँ रहेछ टिपेर भित्र राख ।’ अचेल शिक्षाका नाममा पनि हाम्रा नानीबाबु यस्तै भएका छन् । बच्चा दुई वर्षको भएको हुँदैन, उसको ‘सर्वाङ्गीण विकास’का लागि भनेर टोलटोलमा अनेक सेन्टरहरु खुलेका छन् । त्यसरी टोलटोलमा खुलेका सेन्टरहरुलाई समाजमा ‘मन्टेश्वरी’ भनेर प्रचार गरिएको छ ।
बच्चालाई तथाकथित मन्टेश्वरीमा नराख्ने अभिभावकहरु समाजका नजरमा ‘पाखे’मात्रै होइनन्, गैरजिम्मेवार हुन् । अहिले समाज नै त्यस्ता सेन्टरहरुको एजेन्ट भएको छ । तपाईंको घरमा दुई–अढाई वर्षको शिशु छ भने अचेल भेट हुनेजतिले सोध्ने एउटै प्रश्न हुन्छ– ‘मन्टेश्वरी हाल्दिनु भएन ?’ जसलाई हामी मन्टेश्वरी भनेका छौँ, त्यस्ताको हैसियत के हो ? यसमा भने कसैको चासो छैन । साँच्चै नै उनीहरु बालविकासको आधारले खुलेका केन्द्रहरु हुन् वा बच्चालाई केही हजारको प्रतिरुप देख्ने निकायमात्रै हुन् ? कसैले जान्न र बुझ्न खोज्दैन । मन्टेश्वरी भन्दै आए भने उनीहरुलाई बच्चा जिम्मा नलगाएर पन्छाउन हुँदैन भन्ने मानसिकता हामीमा बसेको छ ।
आज एउटै टोलमा अनेक यस्ता केन्द्रहरु खुल्दा उनीहरुको मापदण्ड के हो ? उनीहरुलाई स्वीकृति कसले दिने हो ? अनुगमन गर्ने निकाय को हो ? अनुगमन हुने नहुने प्रावधान छ वा छैन ? उनीहरुको दाबीलाई विश्वास गर्ने आधार के–के हुन् भन्नेजस्ता अत्यावश्यक विषयमा हामी ध्यान नै दिँदैनौँ । टोलमा यसरी च्याउ उम्रे सरी मन्टेश्वरीका नाममा अनेक केन्द्रहरु खुल्दा सरकारी निकायलाई वास्ता नै छैन, समाजलाई चासो नै छैन । सबै केन्द्र नराम्रा छैनन् होला अथवा भएका जति सबै राम्रा छन् होला, तर त्यसको आधार के हो ? सरकार सुन्दैन अथवा देख्दैन । समाज एसएलसीमा डिस्टिङ्सन आउँछ भन्ने लोभमा फसेको छ । यो लोभका साथ सुरू हुने हाम्रो विद्यालय शिक्षामा अनेक खालका विसंगतिहरु मौलाएका छन् ।
एक जना छिमेकी मेरो घरमा आएर गुनासो गरे– ‘लौ न, यो त साह्रै भएन ।’ उनको कुरा पूरा सुनेपछि उनले जे भोगे, त्यो जायज थिएन भन्ने मलाई पनि लाग्यो । उनकी छोरी एसएलसीमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने जिल्लाको एउटा विद्यालयमा पढेकी थिइन् । छोरीले एसएलसी दिने बेलामा प्रवेशपत्र लिनुअघि उनले विद्यालयमा तिर्नुपर्ने रकम बुझाएर रसिद लिए । रकमको बोझप्रति पनि उनको गुनासो थिएन । तर, रकम असुलेको एउटा शीर्षकप्रति भने उनलाई साह्रै चित्त दुखेछ । छोरी दुई दिनपछि हुने एसएलसी परीक्षामा सामेल हुँदैछ, त्यसका लागि उनले सबै शुल्क पहिले नै बुझाइसकेका हुन् । तर, विद्यालयले पनि चौँथो चरणको परीक्षाका लागि भनेर पाँच सय रूपैयाँ असुले छ । यस्तो पनि हुन्छ, यो त हदै भयो । मेरो ठहर यही थियो । तत्कालै प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई फोन गरेर सुनाए उनले । पदाधिकारीले भने– ‘यो सामान्य कुरा हो, जसले पनि लिन्छन् ।’
कुरा पाँच सयको होइन, नियतको हो । एसएलसी दिने विद्यार्थीसँग फेरि छुट्टै परीक्षा शुल्क भनेर विद्यालयले लिनु जायज होइन भनेर हाम्रो दिमागले भन्छ । तर, पैसाको हरहिसाब गर्ने सञ्चालकहरु यसलाई पनि जायज भन्छन् । यस्ता सामान्य कुरा खोतल्ने हो भने अनेक उदाहरणहरु आउँछन् । अर्थात्, एसएलसीमा राम्रो नम्बर भन्ने ध्याउन्नमा लागेका विद्यालयहरुले अभिभावकबाट जायज÷नाजायज जे भए पनि पैसा लिएरै छाड्छन् । शिक्षा प्रणाली उपयुक्त भएको भए समाजले सामान्य खर्चमा सिर्जनशील दिमाग भएको विद्यार्थी पाउँथ्यो । प्रणाली कमजोर छ, त्यसैले धेरै नम्बर ल्याउने बहानामा व्यापार बढेको छ । नम्बरको पछाडि समाज दौडेको छ । नम्बरले निलेको छ हाम्रो चेतनालाई पनि ।